तिहार नजिकियो, बढ्यो फूलको व्यापार - कृषि पत्रिका
तिहार नजिकियो, बढ्यो फूलको व्यापार
बिहिबार ०७ कार्तिक, २०७६	comments
विरगञ्ज। भारतको कोलकाता घर भई विगत ३१ वर्षदेखि वीरगञ्जको माईस्थानमा फुलको व्यापार गर्दै आउनुभएका सुदर्शन मानिकले तिहारलाई लक्षित गरी २० हजार सयपत्री फूलको माला भारतबाट ल्याउनुभएको छ । कोलकाताबाट रु. ५० मा पाइने सयपत्री फूलको स्थानीय बजारमा प्रति माला रु ७५ देखि १०० सम्म बिक्री हुँदै आएको छ ।
आर्थिक लाभ भएपछि अन्य व्यापारी पनि यस व्यवसायतर्फ आकर्षित हुन थालेका छन । भारतबाट फूल आयात गरी व्यापार गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । वीरगञ्जमा फूलको व्यापार गर्ने फुटकर व्यापारीको सङ्ख्या ६०० को हाराहारीमा छ ।
व्यापारीले कोलकाताबाट फूलका माला रेलमार्ग भएर आयात गर्ने गरेका छन् । भारतबाट आयात गरिएका रङ्गीचङ्गी प्लाष्टिकका फूल समेत बजारमा प्रशस्त देखिन्छ । प्लाष्टिकका कृत्रिम फूल बेच्ने व्यापारीको सङख्या यहाँ अत्याधिक रहेको छ ।
व्यापारीले भाईटिकालाई लक्षित गरी काठमाडौँ, पोखरा, नारायणघाट, भैरहवा, लगायतका जिल्लाबाट मखमली ल्याएर फुल बिक्री गर्ने गरेका छन् ।
तिहारलाई लक्षित गरी चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि कात्तिकको हालसम्ममा भारतबाट रु एक करोड ८२ लाख चार हजार मूल्य बराबरको दुई लाख २५ हजार ६ सय ४८ किलो फूल व्यापारीले आयात गरेको वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी विमलकुमार साहले बताउनुभयो ।
अघिल्लो आवको सोही अवधिमा रु एक करोड ४० लाख मूल्य बराबरको दुई लाख ७८ हजार किलो फूल आयात भएको थियो ।
फूलमा ५ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क लाग्दै आएको छ । यसैबीच व्यापारीहरुले भारतबाट ६८ लाख ४६ हजार मूल्य बराबरको २९९ मेट्रिक टन केरा तथा एक करोड ४७ लाख १४ हजार मूल्य बराबरको १६३ मेट्रिक टन स्याउ आयात गरेका छन् ।
यसैबीच सप्तरी जिल्लाको कञ्चनपुरमा तिहारलाई लक्षित गरी व्यावासायिक रुपमा फूल खेती गरी वार्षिक १० करोडभन्दा बढीको फूलको व्यापार युवाहरुको एक समूहले गर्दै आएको छ ।
कञ्चनरुप नगरपालिका–१२ धरमपुरका स्थानीय पिताम्बर कर्ण, दीपककुमार गुप्ता र अनिल प्रधानले डेढ बिघा क्षेत्रफलमा सयपत्री फूलको व्यावसायिक खेती गरी आर्थिक लाभ लिँदै आएको छन् । ति युवाहरुले परिश्रम गरे स्वदेशमै सुन फलाउन सकिन्छ भन्ने भावनाबाट ओतप्रोत भएर सयपत्री फुलको व्यावसायिक खेती गर्दै आएका छन् ।
डेढ बिघा क्षेत्रफलमा सयपत्री फूलको व्यावसायिक खेती गरी राम्रै आर्थिक लाभ लिन सफल भएको उनीहरुको भनाइ थियो । युवाहरु कर्ण, गुप्ता र प्रधानले एकै स्वरमा भने, “लक्ष्मी पूजा, भाईटीका र छठ पर्वलाई लक्षित गरी ५० हजार वटा माला तयार गरेर कोल्ड स्टोरमा राखेका छौँ ।”
प्रति गोटा रु. ५० देखि ६० सम्ममा बिक्री हुने सयपत्री फूलको माला राजविराज, कञ्चनपुर, फतेपुर, भारदह, हनुमाननगर, छिनमस्ता, बोदेवरसाईन, कल्याणपुर, सुनसरी, उदयपुर, सिरहा, धनुषा, महोतरी तथा देशका विभिन्न भागमा जाने गरेको बताइएको छ ।